FARITRA MAROMARO ETO ANTANANARIVO : Hovatsiana rano fisotro madio
Hisy ny lamina manokana hampidirana rano fisotro madio ho an’ny faritra maromaro eto Antananarivo renivohitra ka ny faritra atsinanana sy andrefana toa an’Ambohimangakely, Ambatomaro, Ambohibe Ilafy, Itaosy, Fenoarivo, Ampitatafika, Ambohimahitsy ary Ambohitrimanjaka no hisitraka izany. 12 avril 2019
Isan’ny nivoitra tao anatin’ny filan-kevitry ny Minisitra ihany koa io tamin’ny alarobia lasa teo.
Lavadrano afaka manome rano hatrany amin’ny 100m3 ho an’ireo faritra ireo no hapetraka izay mbola sokajiana ho isan’ny tetikasa vonjy aina ihany amin’ny fampidiran-drano fisotro madio ho an’ny daholobe. Mbola hisy ihany koa mantsy ny tetikasa goavana izay entina hamatsiana rano azy ireo karakarain’ny fitondram-panjakana, hatsangana ao anatin’ny fotoana fohy ary hisy ny fanomezan-dalana manokana ho an’ireo orinasa voakasik’izany amin’ny fanatanterahana ny asa mba hahatomombana izany ao anatin’ny fotoana fohy.
Ny lalàna mifehy ny tetibola nasiam-panitsiana moa no enti-manatanteraka izany ka vola mitentina hatrany amin’ny dimy arivo tapitrisa ariary no holaniana.